Sehatr’asa-Cyber nokarakarain’ny Biblioredes natao tao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2010 2:48 GMT
Ny 10 Aogositra 2010, vondron'olona iray mifandray amin'ny tranombokin'i Chile no nahatanteraka antsakany sy andavany sehatr'asa-cyber naharitra ora iray ho an'ny tontolo miteny Espaniola. Tao amin'ny Twitter no natao ny hetsika, nikendrena ny hampakarana ny mombamomba ireo trano famakiam-boky ho toy ny sehatra fanovozam-pahalalàna eo amin'ny tontolon'ny niomerika. Maherin'ny 9,000 ny olona nandray anjara tamin'izany hetsika izany].
Ny hetsika dia teo ambany fiahian'ny BiblioRedes [es], lamin'asa iray an'ny Tranomboky Shiliana [Chilean Libraries], ny Tahirim-pirenena, ary ny Biraon'ny Mozea [Museums Bureau] izay miezaka ny [es] ¨hamadika ny olona ho masoivohon'ny fampandrosoana ara-kolotsaina sy ara-tsosialy amin'ny alalan'ny Tranombokim-bahoaka sy ny cyberspace, ka amin'io fomba io, dia handrava ny fitsitokotokoana amin'ny alalan'ny aterineto sy ireo teknolojia niomerika vaovao.”
Ny Tranombokim-bahoaka Jaime Quilán (Tananan'i Pudahuel, Santiago, Chile). Sarin'i fbar mpampiasa Flickr , ampiasaina eo ambany fiarovan'ny Attribution-NonCommercial 2.0 Generic license, Creative Commons.
Araka izay nambaran'ny BiblioRedes [es], ny tanjon'ny hetsika dia :
Hanentana mba hahalasa ireo Tranomboky ho sehatra miantoka ny fahalalahana mahazo vaovao ara-pomba demokratika, fahalalàna, fialamboly ary kolontsaina; izany rehetra izany amin'ny alalan'ny iray amin'ireo tambajotra isan'ny manan-danja manerantany: Twitter […] Ny hevitra fototra dia ny hiresahana mikasika ny Tranomboky amin'ny fampiasana ny tenifototra #biblioteca [dikanteny espaniola ho an'ny hoe tranomboky] mandra-pivadik'izany ho lohahevitra ironana ao amin'ny Twitter.
Ao amin'ny blaogy Cadaundas [es], Enzo Abbagliati, iray amin'ireo mpikarakara, dia nanampy fa [es]:
Ary ho amin'izany, tsy misy tsara toy ny hoe mandrakotra ny Twitter amin'ny fanolorana boky, tranonkala mahaliana na hetsika mitranga any amin'ireo tranomboky. Ary koa ho fampahatsiahivana ireo tantara foronina, horonantsary, na tranga manokana miseho any amina tranomboky iray[, indrindra fa ] ny olo-malaza sy ny blaogin'ireo mpandàla tranomboky .
Satria namporisihan'ny Biblioredes sy Ing. Abbagliati, ireo mpandray anjara dia nizara vaovao sy rohy maro. Ohatra, i Mónica Hidalgo (@skiken) dia nanolotra (nampahafantatra) boky vitsivitsy [es]:
Ny trilogy (Telo tsy afa-misaraka) nosoratan'i Santiago Posteguillo mikasika ireo Scipio Africanus, ireo Legion Voahozona sy ny Fivadihan'i Roma #library
Mifanahantsahana amin'izay, Igor P.L. (@uneletras) dia niteny hoe [es]:
Mitaona hamaky boky iray izay tena nankafiziko tokoa. THE CURIOUS INCIDENT OF A DOG IN THE NIGHTTIME nosoratan'i Mark Haddon #library
Ho fanampiny, Contenidos Locales [es] (Local Contents), “vondrom-piarahamonin'olona mizara, miresaka mikasika izany, sy manangana votoaty niomerika momba an'i Chile[es],” dia nanasa ny olona[es] hitsidika tranomboky iray tao an-tanànan'i Camarones any avaratr'i Chile.
Tsy noferana ho an'i Chile fotsiny ilay hetsika ary nahasarika ireo olona avy any amin'ny tontolo miteny Espaniola rehetra any. Ao amin'ny blaogy Myrna Lee, la biblotecaria…[es] (Myrna Lee, the librarian…) (Myrna, ilay mpitantana tranomboky), Myrna Lee izay mpitoraka blaogy sy mpitantana tranomboky avv any Puerto Rico no manoritsoritra ny dikan'ilay hetsika ho azy manokana [es]:
Nandritra ireny alina ireny, tena nafotaka tokoa ny fifanakalozako hevitra tao amin'ny Twitter: nanomboka tamin'ny olana ara-tsosialy ka hatrany amin'ny lohahevitra mafana sy ny horonantsary izay tsy nisy fitaonana. Ahhh mahatsiaro ny hetsiky ny tranomboky#library. Nanomboka tamin'io andro io dia nihavao indray ny fiankinan-dohako! Ny hetsika #library dia nanokatra ny varavaran'i Amerika Latina sy Espana…ho ahy, tena nahafinaritra be mihitsy. Tadidio, miaina amina firenena iray mitodika amin'ny avaratra aho ary mianatra kosa mijery ny atsimon'ny planeta […] nandray olo-manan-kaja, olona 20 mpitantana tranomboky sy ny sisa; samy mandray am-po ny lalan-jotra izay mamaritra anay, izay maharesy lahatra anay!
Taorian'ny hetsika, Biblioredes dia nampahafantatra [es] mikasika ny fidonan'ny hetsika natao:
Ny hetsika virtoaly, izay ankoatra ny eto anatin'i Chile, dia misy ireo firenena hafa toa an'i Meksika, Puerto Rico, Kolombia, Peru, Venezoela, Arzantina, Brezila, Portugal and Espana ( firenena mitana ny laharana voalohany amin'ny fampiasana ilay tenifototra) nandray anjara, hetsika dokam-barotra ara-tsosialy tanaty aterineto nataona fikambanana iray, ny tranomboky, izay niasa ho an'ireo vondrom-piarahamoniny efa ho 4000 taona.
Farany, Mauricio Fino, mpanaoratra ao amin'ny blaogy MaoLibrarian [es], manao jeritodika ireo vokatry ny hetsika[es]:
Isaorana ny wthashtag.com sy Twirus [izahay] nanaraka tamin-karavoana ny fomba hahatonga ny #biblioteca ho lohahevitra iray amin'ny teny Espaniola ironana ao amin'ny Twitter, fisaorana ho an'ireo tweets miisa 9,798 , ireo mpiara-miketrika 1.576 ( eo ho eo amin'ny 1,399.7 tweets isan'andro) nandritra ireo 7 andro farany[. Izany dia] midika fa isika ( na farafaharatsiny, izaho manokana) dia tsy mahalala hoe firy marina no tena isan'ny olona nandray anjara nandritra ny ora.
Ankoatra izany, afaka nahita koa isika fa ny 42.2% tamin'ireo dia famerenana nandefa tweets [retweets] (heveriko ho midangana ihany io), fanamarihana ny 60.6%, ny 16.3% dia manana tenifototra mifampidimpiditra ary 27.2% no tafakatra anaty “Top 10″ (izany dia entina milaza fa, mety ho olona folo monja ve no nahefa ny ampahefatry ny asa vita?). Raha nijery [ny Top 10] amin'ny antsipirihany isika, dia hahita 4 amin'ireo 8 nikarakara ilay hetsika. Izaho akory tsy miteny hoe ratsy izany, saingy heveriko fa vitsy loatra io isa io [raha jerena fa ] ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy dia tena “nivatravatra” tokoa mba hisarihana ny sain'ireo mpiara-miketrika an'arivony vitsivitsy.